Mpampiasa tsy fantatra! Torohevitra avy amin'ny Semalt Expert amin'ny zavatra azon'ny olona atao aminy
Olona iray isam-bolana no mandray mailaka maherin'ny 100 isan'andro; Ny sasany amin'izy ireo dia avy amin'ny webmasters raha toa kosa ny hafa dia manana orinasa na tranonkala fampahalalam-baovao manentana ny vokatra sy ny serivisy. Toy izany koa, ny tranonkalanao dia mety hahazo mpitsidika be dia be isan'andro, ny ankamaroany dia tsy manana fifandraisana na tombontsoa amin'ny pejy Internet anao. Rehefa mivezivezy amin'ny tranokalanao izy ireo, dia miala avy hatrany izy ary tsy liana amin'ny lahatsoratrao. Noho izany, niakatra 100% ny taham-pitenenana. Hoy i Lisa Mitchell, mpitarika ny Success Manager Semalt , fa zava-dehibe ny manakana ireo mpampiasa rehetra tsy mila ampiasaina mba hahafahanao miantoka ny fiarovana sy ny fiarovana ny tranokalanao.
1. Alao ny mpampiasa tsirairay:
Mora ny manakana ny mambra tsirairay ary manakana azy ireo tsy hifandray aminao amin'ny hoavy. Azonao atao izany amin'ny alalan'ny mombamomba azy ireo. Ohatra, raha misy olona mampahatezitra anao ao amin'ny Facebook na tambajotra sosialy iray hafa, azonao atao ny mametraka azy mora foana amin'ny alàlan'ny fanindriana ny safidy Block ao amin'ny ID Facebook. Toy izany koa, azonao atao ny manakana ny mpisera tsy fantatra amin'ny mailaka ary mandefa ny ID toy ny spam. Raha voasakana ny mpampiasa iray dia tsy afaka mandefa hafatra ho anao izy, toy ireo hafatrao, tsidiho ny mombamomba anao ao anatiny na jereo ny fepetra vaovao. Na izany aza dia ho afaka hahita ny sarinao izy ary mety hifandray aminao amin'ny alalan'ny ID hafa.
2. Manaisà vondron'olona manokana:
Raha reraka amin'ny vondron'olona ianao dia tokony hanamarina ny safidin'ny Settings> New contacts ao amin'ny sehatra Privacy anao ary atsaharo ny tsy hifandray aminao amin'ny hoavy. Ity dia afaka mampifandray ny fifandraisana, toy ny ID na valiny amin'ny mailaka sosialy, mba hanakanana azy ireo avy hatrany. Raha ohatra ka, raha misy olona tsy mifanaraka amin'ny mombamomba anao ary mifandray aminao tsikelikely dia azonao atao ny mamorona sivana ao amin'ny kaonty Gmail anao ary ampidiro ireo ID ireo ho an'ireo sivana ireo.
3. Mamoròna ID mailaka vonjimaika:
Ny iray amin'ireo zavatra tsotra indrindra sy tsara indrindra azonao atao mba hampitsaharana ny olona tsy hifandray aminao dia ny mamorona ID ny fotoana fohy. Izany dia hisoroka ireo mpampiasa tsy fantatra anarana mba handefasana hafatra vaovao tsy marina, sy sandoka ary malaza. Fomba fijery mahazatra fa 90% -n'ny olona no misoratra anarana amin'ny kaonty an-tserasera miaraka amin'ny anarana voalohany sy ny ID voalohany. Vokatr'izany dia manomboka mahazo hafatra avy amin'ireo olona tsy fantatra sy mahiahina izy ireo. Ny ankamaroan'ny mailaka dia alefa any amin'ny tranokalan'ny fantsom-baiko na spam anao, fa maro amin'izy ireo dia alefa any amin'ny mailakao.
4. Fanamarihana avy amin'ny newsletters tsy fantatra:
Raha nisoratra tamin'ny gazetiboky maromaro na fampahafantarana fampahafantarana ianao dia afaka mahazo alalana am-polony isan'andro ianao. Ny fomba tsara indrindra hanafoanana ireo mpisera tsy fantatra online dia ny tsy hanoratra ny tolotra tsy tianao. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia tokony hiala amin'ny gazety na ny mailaka fampiroboroboana izay manelingelina anareo isan'andro. Noho izany, tsindrio ny bokotra Notubscribe ary esory ny tranokala fandefasana hafatra mampikorontan-tsaina anao. Ny fanoratana dia ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra hanakanana ny habetsaky ny tranonkala miditra ao amin'ny mailaka Source .